प्रदेश १ मा पनि आईपुगेको हो सलह ? खोटाङ र ओखलढुङ्गामा भेटियो सानु समुह – EST Nepal
प्रदेश १ मा पनि आईपुगेको हो सलह ? खोटाङ र ओखलढुङ्गामा भेटियो सानु समुह
estnepal १६ असार २०७७, मंगलवार १४:०५
ओखलढुंगा । भारत हुँदै तराईका जिल्लामा देखिएको सलह अहिले पहाडतिर सरेको छ । मकैलगायत अन्नबाली र घाँस समेत खाने सलह खोटाङ र ओखलढुंगामा देखिएको हो । खोटाङको दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी र हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकामा शनिबार सलह फेला फरेको थियो । २०र३० वटाको समूहमा सलह फेला परेको हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाका मेयर इवन राईले बताए । उनले ठूलो समुहमा नदेखिए पनि भारतबाट तराईहुँदै सलह पहाड छिरेको बताए ।
त्यस्तै ओखलढुंगाका सिद्धिचरण नगरपालिका, चम्पादेवी गाउँपालिका र सुनकोसी गाउँपालिकामा सलह फेला परेका छन् । सलह सानो सानो समूहमा देखिएको सुनकोसी गाउँपालिका ४ का नवराज खड्काले बताए । उनले निकै सानो समूहमा फेला परे पनि सलह फेला परेकाले किसानलाई चिन्ता थपिएको खड्काले बताए ।
त्यस्तै चम्पादेवी गाउँपालिका र सिद्धिचरण नगरपालिकास्थित सदरमुकाममा सलह फेला परेको स्थानीयले बताए । सिद्धिचरण नगरपालिका ११ का उमेश राजभण्डारीले सलह बजारमै आएको बताए । निकै सानो संख्या भए पनि बढ्न सक्ने भएकाले सतर्क हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सरकारी निकायले भने यसरी फेला परेका सलहको सबै लक्षण र स्वरुप मिल्ने किरा के हो भन्ने यकिन गरेको छ । कृषि ज्ञान केन्द्रले यसबारे अध्ययन भइरहेको जनाएको छ । कृषि ज्ञान केन्द्र ओखलढुंगाका कृषि प्राविधिक टिका बानियाले किसानहरुले सलह भेटिएको भन्दै फोटो सार्वजनिक गर्न थालेकाले अध्ययन भइरहेको दावी गरे । अध्ययन गरेर यकिन गर्ने उनले जनाए ।
कोरोनाको त्रासमा रहेका नागरिक बारीमा लगाएको बालीमा सलह लाग्ने र खाद्यन्न नष्ट हुने चिन्तामा छन् । किसानका गुनसा तत्काल अध्ययन गरेर सम्बोधन हुनुपर्ने राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका जिल्ला अध्यक्ष हेमकुमार घिमिरेले बताए ।
पाँचथरमा विदेशबाट फर्केकाका परिवार पनि क्वारेन्टाइनमा
२५ चैत्र २०७६, मंगलवार ०९:०१
संकटसंग जुध्न प्रदेश १ का राजनीतिक दल एक ठाउँ
२३ चैत्र २०७६, आईतवार १८:४४
प्रहरीले दुख दिएको ग्यास बिक्रेताको गुनासो, व्यवहारमा सुधार नभए ग्यास नबेच्ने
१ बैशाख २०७७, सोमबार २१:०८
८ बैशाख २०७७, सोमबार ०७:३३
अचम्मको कुरा : टेलिकममा फोन गर्नुहोस्, कोरोना सङ्क्रमण भए, नभएको थाहा हुन्छ
३ बैशाख २०७७, बुधबार ०८:५१
खोटाङकी युवतीको कोरोनाबाट बेलायतमा मृत्यु
१२ बैशाख २०७७, शुक्रबार १२:२४
६ जिल्लाका एसपी फेरिए, सुनसरीमा कमल थापा